Somali | Metro
Ma qabtaa su’aal ku saabsan barnaamij ama adeeg Metro? Wac 503-797-1890 (8-da galinka hore illaa 5-ta galinka dambe maalmaha shaqada) oo sheeg luqadda aad ku hadashid.
Metro waxay u adeegtaa in ka badan 1.5 malyan oo qof oo guryahoodu ku yaalaan 24 magaalo oo ku yaala gobolka Portland, Oregon. Codbixiyeyaasha ayaa Metro weydiistay in laga gargaaro caqabadaha iyo fursadaha ka gudba xuduudaha magaalo iyo degmo.
Metro wuxu isku keenaa dadka si loo gaadho go’aamo ku saabsan meesha aynu ku korayno, sida aynu u socdaalno iyo waxa ku dhaca qashinkeena. Metro waxay hagtaa maalgalinta xagga shaqooyinka, jidadka iyo gaadiidka waxana ay ka shaqeysaa in la badbaadiyo beeraha, kaymaha iyo hawo iyo biyo nadiif ah oo ay helaan da’aha mustaqbalka.
Metro waxay leedahay oo hawlgalisaa 16,000 aykar oo ah dhul dhawrsan iyo aagag dabiici ah, Oregon Zoo (Beerta Xayawaanka), Portland’5 Centers for the Arts (Xarumaha Farshaxanka), Portland Expo Center (Xarunta Carwada) iyo Oregon Convention Center (Xarunta Shirarka). Laba goobood oo loogu talogalay dib-u- isticmaalgalinta iyo qashinka ayaa deganeyaasha iyo ganacsiyada ka aqbala qashinka, wixii dib loo isticmaalgalin karo iyo qashinka khatarka ah. Waxa kale oo ay Metro bixisaa qalab loogu talogalay nolol maalmeedka, laga bilaabo khad teleefon oo ah dib-u-isticmaalgalinta illaa maab baasgeel oo ah illaa MetroPaint.
Marka aad wacdid:
Qaabille Metro ayaa ku jawaabi doona Ingiriisi oo dhegaysan doona inaad sheegtid magaca luqadda aad ku hadashid.
Waxa lagu galin doonaa sugitaan inta aanu ka helayno turjubaan ku hadla luqaddaada.
Anaga oo isticmaalayna turjubaanka waxa aanu ku weydiin doonaa sababta wicitaankaaga iyo macluumaadka sida laguula soo xidhiidhi karo.
Wakiilka Metro ee haboon ayaa dib kuu soo wici doona gudaha laba maalmood iyada oo uu khadka ku jiro turjubaan.